स्वास्थ्य /जिबनशैली – NepalajaMedia
न्सरका बारेमा एउटै धारणा के छ भने क्यान्सर पूर्ण रुपले निर्मूल पार्न सकिँदैन । तर, चिकित्सकहरुका अनुसार यदि सुरुवाती चरणमा क्यान्सरको संकेत थाहा पाउने हो भने यसको उपचार सम्भव छ । यस्तै केही संकेत जुन पुरुषमा देखिन्छ । १. पिसाबमा समस्या – छिटो–छिटो पिसाब लाग्नु, पिसाब गर्दा दुख्नु, पोल्नु, पिसाब रोक्न गाह्रो हुनु यो प्रोस्टेड क्यान्सर वा प्रोस्टेट ग्रन्थिको आकार ठूलो हुनुको संकेत हो । २. अण्डकोषमा परिवर्तन – अचानक अण्डकोष सुन्निनु, भारी महशुस हुनु वा कुनै परिवर्तन महशुस हुनु पनि अण्डकोष वा प्रोस्टेट क्यान्सरको संकेत हो । ३. पिसाबमा रगत देखिनु – पिसाबमा रगत देखिएमा यो ब्लड वा किड्नी क्यान्सरको संकेत हो । ४. दिसामा रगत देखिनु – दिसामा रगत देखिएमा मलद्धारका नली सुन्निएको, ब्लड, वा किड्नी क्यान्सरको संकेत हो । ५. छालामा परिवर्तन – छालामा कुनै दाग, तिल वा कालो रंगमा
काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले आतङ्कित भएको बेला रोग लाग्नै नदिने उपायतिर धेरैको ध्यान गएको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपान, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिन आयुर्वेद चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यसका लागि जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्न राजधानीको नरदेवीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय निर्देशक डा. प्रदीप केसी जोड दिन्छन् । तर हाल होम आइसोलेसनमा बसेका, सामान्य लक्षण भएकाहरूले यस्ता औषधिको सेवन गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । यो औषधि सेवनले उनीहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न मद्दत गर्छ । चिकित्सालयले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण वा रोगबाट स्वस्थ राख्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न १२ जडीबुटी मिश्रित तीन प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको जानकारी दिए ।उनका अनुसार विभिन्न जडीबुटीबाट बनाइएका जेष्ठव
’खाएको केही घन्टाभित्रै कोभिडलाई मा र्ने एक च क्की बनाउँदै गरिएको एक विज्ञले बताएका छन् । यो चक्की बजारमा आएपछि लकडाउन ल’गाउन नपर्ने बताइएको छ । केही महिनाभित्र यस चक्कीमाथि थप अनुसन्धान गरिने र प्रयोग गर्न ला यक ठ हरिएमा बजारमा ल्याइने विज्ञहरूको भनाइ छ । एन्टीभाइरल चक्कीले कोरोनाभाइरसलाई शरीरमा रूप परिवर्तन गरी गरी फैलिन दिँदैन । अहिलेका नयाँ भेरिएन्टहरूको असरलाई रो क्ने र भाइरस फैलिन नदिने काम यी एन्टीभाइरलले गर्ने आशा छ । बेलायत सरकारले एन्टीभाइरल चक्कीको अनुसन्धान गराइरहेको हो । ग्लास्गो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक केभिन ब्लाइथ चक्की अनुसन्धान टोलीका प्रमुख हुन् । उनले भने, ‘एन्टीभाइरल च’क्कीले काम गरेमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले काम गरेमा स्वास्थ्य सेवामाथि च रम द बाब पर्ने छैन किनकि रोगीहरू अस्पताल आउनै पर्दैन । अनि लकडाउन वा अन्य किसिमका क ठोर नि यन्त्रण पनि लगाउन पर्दैन ।
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला । ९८ – ९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो । १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला । शरीर दुखेमा / टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ । २. पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला । यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला । यसलाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ । पेटमा २ वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलिगाँठानेर एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नुहोला । यसले फोक्सोको क्षमता बढाउछ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ । ३. भिटामिन सी २ पटक, जिंक २ पटक, भिटामिन डी हप्ताको १ पटक खानुहोला । आबश्यकता अनुसार पारासिटामोल, कफ सिरप / ट्याब्लेट खान सकिन्छ । ४. अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला । यो नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिय
काठमाडौँ ‘ क्या’न्सरका थुपै का’रण हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैली र खानपिन नै हो । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। जिवित रहँदासम्म हाम्रो शरीरमा जीवन सम्वन्धी कयौं क्रियाहरु चलिरहन्छन्। यसैमध्ये एउटा क्रिया कोशिकाहरु अर्थात् सेल्स बन्नु हो। यो क्रियामा शरीरका पुराना र मृत कोशिकाहरु आफै नष्ट भइरहन्छन् तर तिनको स्थानमा नयाँ कोशिकाहरु बनिरहन्छन् । यो प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा सँधै चलिरहन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** तर, क्या’न्सर भएको अवस्थामा शरीरमा रेड ब्लड सेल्स र ह्वाइट ब्लड सेल्स अनावश्यकरुपमा बढ्न थाल्छ। यी क्या’न्सरका कोशिकाहरु बिस्तारै-बिस्तारै शरीरमा फैलिन्छन् र स्वस्थ कोशिकाहरुको काममा पनि बाधा पुग्छ। यीनै रोगी कोशिकालाई क्या’न्सर भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि कम्प्युटरमा जस्तै धेरै प्रकारका कोडिङ हुन्छन्, जुन जिन
काठमाडौँ । थाइराइड एक प्रकारको हर्मोन हो। हाम्रो थाइराइड ग्रन्थीले शरिरबाट आयोडिन लिएर यसलाई बनाउँछ।यो हार्मोन हाम्रो मेटाबोलिजमलाई कायम राखिराख्नका लागि आवश्यक हुन्छ। जब यो ग्रन्थीले कुनै कारणवश धेरै हर्मोन बनाउन थाल्छ, त्यतिबेला थाइराइड बढ्ने गर्दछ। थाइराइड बढ्दा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्छ। महिलाहरुमा यो रोग बढि देखिन्छ। यो रोग लागेपछि छटपटी हुनु, राम्रोसँग निन्द्रा नलाग्नु, महिनावारी गडबडी, मुटुको धड्कन बढ्नुजस्ता समस्या देखापर्न थाल्छ। यसको तत्काल उपचार आवश्यक छ। समयमा नै उपचार गरी यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। यसका साथै, यो रोग लागेपछि के खाने के नखाने भन्ने कुराको पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आज हामी तपाईंलाई थाइराइड रोगी कस्ता खानेकुरा खानुहुँदैन भन्ने बारे जानकारी दिन्छौं। क्याफिनः हुन त क्याफिनले थाइराइडलाई प्रत्यक्ष रुपमा बढाउँदैन तर यसले ती समस्यालाई बढाउँछ जु
काठमाडौ । पूरै देश कोरोना महामारीमा परेको छ । हरेक नागरिक कोरोनावाट जोगीने अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । व्यक्तिले सबै नियमहरू पालना गर्न थालेको छ, शारीरिक दूरी बनाउने देखि मास्क लगाएर कोरोनावाट बच्ने उपाय गरिरहेका छन् । सबैलाई कोरोनाबाट टाढा रहन यति मात्र पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आफैं र आफ्नो शरीरलाई यति धेरै तयार गरौं कि कोरोना भए पनि, यो हल्का हुन सक्छ र हामी यसलाई सजीलै पार गर्न सक्छौं। यसको लागि, सबैभन्दा पहिले, हामीले हाम्रो फोक्सोको स्वास्थ्यलाई बलियो राख्नु पर्छ। यदि फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्दछ भने शरीरमा अक्सिजनको स्तर पनि सजिलैसँग पुग्छ । यस्तो अवस्थामा फोक्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।कोरोनाले फोक्सोमा सिधा ह म ला गर्दछ, त्यसपछि सास फेर्ने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हामीले पहिले नै फोक्सोलाई बलियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। त्
काठमाडौ । नेपालमा अहिले कोरोनोको दोस्रो लहरको महामारीले समस्या पारेको छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढेको छ । पहिलो लहरको महामारीमा भन्दा यो पटकको कोरोना ७० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन कमि हुनु निकै ठुलो समस्या हो । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले स्वाँसप्रस्वास निकै समस्या आइरहेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमित हुनेहरुको अक्सिजन लेभल घटेर ज्यानसमेत भइरहेका छन्। स्वाँसप्रस्वासमा समस्या आइहाले तत्काल के गर्न सकिन्छ ? आउनुस् विज्ञहरुले सुझाएका उपायबारे चर्चा गरौं। विज्ञका अनुसार स्वाँस प्रस्वासमा समस्या आए ग्याँस सिलिन्डर, ग्यास स्टोभ, मैनबत्ति, ग्यास हिटरभन्दा कम्तिमा ६ फिट टाढै बसौं। पेन्ट थिनर, एरयोसोल, क्लिनिङ फ्लुजस्ता फ्लेमेबल प्रोडक्टहरु प्रयोग नगरौं। त्यस्तै पेट्रोलियम, आयल, ग्रीस बेस्ड क्रिम वा भ्यासलिनजस्ता क्रिमहरुको पनि प्रयोग न
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको पुनरावर्ती घटनाने चिकित्सक र सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएको छ । कोरोना जितियो भन्ने अवस्था आइसकेको बेलामा फेरी दोस्रो चरणको महामारी सुरु भएको छ । कोरोनाको दोस्रो स्ट्रेन थप खतरनाक भएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । यो कोरोना पहिलेको तुलामा ७० प्रतिशत बढी भएको चिकित्सकको भनाई छ । कोरोनाको नयाँ स्ट्रिन पनि अहिले विभिन्न मुलुकमा बढीरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सबैभन्दा ठूलो समस्यामा परेको छ । शनिवार मात्र डेढ लाख थप कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यी सबैको यो चिन्ताको विषय हो कि धेरै मानिसहरूमा, साधारण रोगको साथ पनि, कोरोना पुष्टि भएको छ । रुघा, खोकी, ज्वारो र दुखाई बेगर पनि कोरोना पोजेटिभ देखिन थालेका छन् । साथै दोस्रो स्ट्रेनमा थप नयाँ लक्षणहरु पनि देखिएका छन् । भारतमा, कोरोनाका एक लाख भन्दा बढी संक्रमित दिनहुँ थपिएका छन् । खोकी, ज्वरो र श्वाद थाहा नपाउनु पहिलो चरणको कोरो
काठमाडौँ । किड्नी मानिसको शरीरको एक महत्वपूर्ण अंग हो । किड्नी शरीरको अतिरिक्त पानीको साथमा हानीकारक र विषाक्त पदार्थलाई पनि बाहिर निकाल्नमा मदत गर्दछ । र हाम्रो शरीरमा बगेको रगतलाई सफा र स्वच्छ राख्दछ । हाम्रो शरीरमा २ वटा किड्नी हुन्छन् । हाम्रो शरीरको एक किड्नीले काम नगर्दा दास्रो किड्नीले पनि काम चल्दछ । आजकलको गलत जीवनशैली र गलत खानपानको कारणले अधिकांश मानिसको कम उमेरमा नै किड्नी फेल हुने समस्या देखिन्छ । किड्नि फेल हुनभन्दा पहिला शरीरले यस्तो संकेत देखाउँदछ । आउनुहोस् जानौँ ती संकेत के के हुन् त रु यदि पिसाब गर्ने बेलामा पिसाबमा रगत देखिएमा किड्नी खराब भएको संकेत बुझाउँदछ । यस्तो अवस्थामा तपाई युरोलोजिस्टलाई सम्पर्क गर्नुहोला । यदि तपाईको तौल अचानक बढ्दै आएको छ भने र शरीरको अंग सुनिदै आएको छ भने सावधान रहनुहोस् । यो संकेत किड्नी खराब भएको हुनपनि सक्छ । यदि तपाईलाई बढि पिसाब